Ọ bụ oge na-aga ejiji shopping. Onye na-adịghị n'anya a uwe elu? The style bụ kama iche Brazil carnivals. Chee echiche ọzọ "Prussian Soldier" na a arọ dose of ntecha na sequins!
N'ihi bọọlụ na ndị ọzọ ime ụlọ ihe, mkpa ekike na-atụ aro. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ahụmahụ ememe a, ị chọrọ aga ná mpụga! Dị na-echeta na-eyi ihe na-ekpo ọkụ n'okpuru! The real Cologne carnival fan is not put off by the weather! Ọbịa onye na-abata na nke ikpeazụ nkeji ga-ahụ masks, ekike, na eme na-elu na ọtụtụ na-echekwa na etiti obodo. Dị ka a ikpeazụ resotu, a mfe red akwụkwọ imi bụ ihe niile ị chọrọ. chọrọ ụfọdụ uwe Ama.
Nke a na okwu na-ezo aka pubs, Ogwe ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Fọrọ nke nta niile ha na-akụkụ na-eme ememe Cologne ejị. Ha ewepụsị ihe ngwá ụlọ ike a nnukwu-agba egwú n'ala na icho mma na ihe niile yi ruo ụbọchị isii nke ememe a n'usoro. N'ọtụtụ obodo pubs, naanị Kölsche music na-egwuri (songs na Kölsch olumba). Ị ga-achọpụta mgbe mgbe ruo 300 mita ogologo queues n'ihu ọdịnala pubs.
na 1824 na Beuel, a akụkụ nke Bonn, a ìgwè nke washer inyom kpụrụ ha Karneval kọmitii. O yiri ike gwụrụ ha nke na-eme na-asa ákwà mgbe onye ọ bụla ọzọ na-eme ememe Karneval. Ha stormed Town Hall na ada n'elu obodo ọchịchị. (Ugbu a na-echeta ... Karneval bụ oge mgbe ndị ọchịchị na-n'ihu ọha caricatured, na a mock ọchịchị na-hoputara. taa, a "mgbe a batara nke Beuel Town Hall" ndị inyom na-egosi ndụ na Television. girl Power!
Mgbe a ejị brunch na Kölsch biya, e nwere a arụmọrụ na bivouac nke ejị ọha mmadụ na a agha omenala na Neumarkt. In the evening you can go to the Ghost Parade.
On ụtụtụ, Katọlik na-aga chọọchị na-enweta a cross ntụ n'egedege ihu ha dị ka ihe ịrịba ama nke nchegharị. na mgbede, afọ-ejị oge na omenala kwubiri na a azụ nri abalị.
Have we convinced you to attend Cologne Festival 2019, ma? Jidere gị gbaa ụgbọ okporo ígwè si Sava A Train in minutes with no extra, pesky ụgwọ! Which means more money for Weetschaff 🍻
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cologne-festival/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#CologneFestival #koln europetravel ememme longtrainjourneys trainjourney travelcologne traveltips